भाग्यशाली पुरुष त्यही हो जसले यी गुणले पोख्त श्रीमती पाउछ ! | KTM Khabar
भाग्यशाली पुरुष त्यही हो जसले यी गुणले पोख्त श्रीमती पाउछ !
२०७४ जेष्ठ २८ गते ११:१३ मा प्रकाशित
जेठ २८ । श्रीमतीलाई श्रीमानको अर्धांगिनी अर्थात शरीरको आधा अंग पनि भन्ने गरिन्छ । यसको अनुसार जो व्यक्तिको श्रीमतीसँग यी ४ गुण हुन्छ, उसलाई स्वयम् देवराज इन्द्र यानकी भाग्यशाली भन्ने गरिन्छ ।
ज्ञ।घर सम्हाल्ने जिम्मेवारीः
घरको काम जस्तै खाने बनाउने, सरसफाई गर्ने, घरको सजावट गर्ने, कपडा तथा भाडा सफा गर्ने, बच्चाको जिम्मेवारी निभाउने, घरमा आएका पाहुनाहरुको मान–सम्मान गर्ने, कम खर्चमै घर चलाउन सक्ने आदि कार्यमा निपुण हुन्छिन्, भने उनैलाई गृहकार्यमा दक्ष मान्ने गरिन्छ ।
जुन श्रीमती घरमा सबैसँग मिठो बोल्छिन् आदर र मायाँको भाव देखाउँछीन उनी सबैको प्रिय हुन्छिन् । श्रीमानसँगै आफ्नो घरको अरु सदस्यलाई प्रेमपुर्बक बोल्ने श्रीमतीले कहिलै पनि घरमा कलह सृजना गर्दीनन् ।
श्रीमतीको लागि सबैभन्दा पहिले धर्मको ख्याल हुनु जरुरी छ । उनले आफ्नो श्रीमान र परिवारको हितमा सोच्नु जरुरी छ । उनले यस्तो काम गर्दिनन् जुन कामको कारण परिवारमा कलह होस् वा कसैलाई चित्त दुखोस् । जो निरन्तर आफ्नो धर्मको पालना गर्छिन् उनि संधै आफ्नो श्रीमानको प्रिय बन्छिन्
श्रीमानको हरेक कुरा मान्नेः
श्रीमती आफ्नो श्रीमानलाई सर्वस्व मान्छिन् उनि आफ्नो श्रीमानको हरेक कुराको इच्छा पुरा गर्न आतुर बन्छिन् । उनलाई धर्म ग्रन्थहरुमा पतिव्रता मानिन्छिन् । पतिव्रता पत्नी सदैव आफ्नो श्रीमानको सेवामा लाग्छिन्, भुलेर पनि उनले आफ्नो पतिको चित्त दुखाउने कुरा गर्दिनन् । उनीहरुको दाम्पत्य जीवन निकै सुखदायी बन्ने गर्छ । उनि आफ्नो श्रीमानलाई कुनै काम गर्न आग्रह गर्दा पनि निकै संयमित बन्ने गर्छिन् ।